Zanu-PF neMDC Zvonetsanazve paNyaya yaSachigaro Mutsva weAU
Nyaya yekuti ndiyani achave sachigaro mutsva weAfrican Union Commission yavewo kukonzera kusagadzikana muhurumende yemubatanidzwa pakati peMDC-T neZanu-PF.
Vari kuda chigaro chasachigaro weAU ndiVaJean Ping vekuGabon, avo varipo ikozvino uye Amai Nkosazana Dhlamini Zuma vekuSouth Africa. Gabon yakatumira nhumwa yayo kuZimbabwe, VaEmmanuel Issoze Ngendet, vachitsvaga rutsigiro.
Asi Zanu-PF inoti haina kufara nekuti vakazoita musangano nemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, kumba kwavo kuStratahaven muHarare mushure mekunge vaita musangano nevakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika, VaJohn Nkomo.
ZBC, iyo inorerekera kuZanu-PF inoti Gabon inoshandiswa neFrance kuti ipe mari kuMDC-T ichityora mitemo yenyika isingatenderi kuti mapato ezvematongerwo enyika apihwe mari nenyika dzekunze.
Tayedza kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika, VaSimbarashe Mumbengegwi, asi hatina kuvabata. Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC-T, VaJameson Timba, vanoti chava chigariro kuti ZBC inoreva nhema.
Nyanzvi munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika, VaClifford Mashiri, avo vanoshanda vakazvimirira vanoti zvoitwa neZanu-PF zvinonyadzisa uye ishaisano yekuti MDC isaone wekudyidzana nayo.